China Conformal Coating Warshad iyo soo saarayaasha |Kaz
Faa'iidooyinka mashiinka rinjiga saddex-cadayga tooska ah: maalgelin hal mar ah,
faa'iidada nolosha oo dhan.
1. Waxtarka sare: daahan otomaatig ah iyo hawlgalka khadka shirarka ayaa si weyn u kordhiya wax soo saarka.
2. Tayo sare leh: Qadarka daboolka iyo dhumucda rinjiga saddexda ah ee alaabta kasta waa mid joogto ah, joogteynta alaabadu waa mid sareysa, tayada saddexda caddayntu waa mid deggan oo la isku halleyn karo.
3. Saxnaanta sare: dahaarka xulashada, lebbiska iyo saxda ah, saxnaanta dahaarka ayaa badanka sarreeya buug-gacmeedka.
4. Kharash jaban: badbaadi shaqada, kaydi kharashka cajaladda ilaalinta iyo waxyaalaha kale ee la isticmaali karo oo badbaadi dhejinta iyo burburinta.
5. Waqtiga ilaalinta cajaladaha waxay si weyn u yareeyaan kharashka wax soo saarka waxayna wanaajisaa ka faa'iidaysiga shaqada.
6. Keydso xabagta: qaddarka dahaarka buug-gacmeedka ee saddex rinji-ka-hortagga badeecad kasta waa mid aan is-waafaqayn, dhumucda filimkuna waa mid aan sinnayn, halka mashiinku yahay daahan xulashada, daahan atomized, dhumucda filimkuna waa dhexdhexaad iyo sax, badbaadinta koollada.
7. Kaarboon yar iyo ilaalinta deegaanka: Mashiinku wuxuu leeyahay awood hoose iyo isticmaalka tamarta yar;Mashiinku wuxuu qaataa qaab-dhismeed si buuxda u xiran oo leh dib u soo kabashada gaaska qiiqa xagal badan iyo nidaamka bullaacadaha si looga fogaado wasakheynta hawada aqoon-is-weydaarsiga, ilaalinta caafimaadka shaqaalaha, iyo abuurista jawi shaqo oo ammaan ah.